खाली पेटमा लिची किन खान हुँदैन? « LiveMandu
खाली पेटमा लिची किन खान हुँदैन?
सन् २०१९ को जुन महिनामा भारतको बिहार राज्यस्थित मुजफ्फरपुर शहरमा १५ दिनको बिचमा मस्तिष्कज्वरो तथा क्युट इन्सेफलाइटिस सिन्ड्रोम (एइएस)को कारण ९३ जनाभन्दा धेरै केटकेटीको ज्यान गयो । गर्मीको समयमा बालबालिकाहरु एक्कासी ढल्ने, बर्बराउने, छारे रोगले लड्ने जस्ता धेरै समस्या देखिन थाल्यो । जसमध्येका केही बालबालिकाहरुको मृत्यु भएको खबर सार्वजनिक भए । आखिर गर्मीको मौसम, खानेकुरा र जीवनशैलीमा के त्यस्तो सम्बन्ध छ त, जसका कारण ती बालबालिकाहरुले ज्यान गुमाउनुपर्यो ?
खाली पेटमा लिची खाएकै कारण बालबालिकाहरुको मृत्यु भएको खबर बिबिसीले सार्वजनिक गरेको थियो ।
लिची सेवनका तथ्यहरुबारे यो जानकारी तपाईंलाई उपयोगी हुनसक्छ । खाली पेटमा काँचो लिची खाएमा लिचिमा रहेको विषाक्त तत्वले उत्पन्न गर्ने रसायनिक असन्तुलनका कारण ज्याननै जाने सम्भावना हुन्छ । लिचीमा हाइपोग्लिसीन-ए र मिथाइल एन्साइक्लोप्रोपाइल्गिसीन नामको विषालु तत्व पनि पाइन्छ । जसका कारण वान्ता हुने मात्र नभई छारेरोग झै लक्षण देखिने र विशेषत कुपोषित बालबालिकाहरुले काँचो लिची खाएमा ज्यानै जाने सम्भावना पनि हुन्छ । व्रत अर्थात उपवास बसेको बेला फलाहारको रुपमा लिचीको सेवन गर्नुहुन्न ।
विहारको त्यस घटनामा सिकिस्त विरामी भएर अस्पतालमा भर्ना भएका अधिकांश बालबालिकाको रगत र पिसाबको जाँच गर्दा ती दुवै तत्व पाइएको थियो । स्थानीय अधिकारीहरुले गरेको जाँचका क्रममा अधिकांश बालबालिकाले राति केही नखाएको र बिहानै धेरै लिची खाएको पुष्टि भएको थियो ।
पहिलेदेखि नै कुपोषणको शिकार तथा अन्य कुनै रोगले बिरामी बालबालिकाहरुले लिची खाँदा यो रोग लाग्ने खतरा धेरै हुन्छ ।
यस घटनाको जाँचमा संलग्न चिकित्सकहरूले सो क्षेत्रका बालबालिकालाई सीमित मात्रामा मात्र लिची खान तथा लिची खानुअघि सन्तुलित भोजन गर्न सल्लाह दिएका थिए ।